बुधवार, जेठ १२, २०७८ आजको पोष्ट
बुटवल : विपतको समयमा नेताहरूले अक्सिजन सिलिन्डर गाउँ–गाउँमा पठाउदै चुनावी प्रचार मात्रै गरेनन्। उनीहरूले अनुदानमा आएका नीला रंगका सिलिन्डरहरू स्थानीयसम्म पु¥याउदै व्यापार गरिरहेका छन् । पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले गृह जिल्ला रोल्पाका सात तहमा आफ्नो पहलकदमी–मार्फत् अक्सिजन सिलिन्डर पठाएपनि उनका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा पैसा लिएर बेचिरहेका छन्।
पूर्वमन्त्री पुन सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती बधाई तथा धन्यवादको पात्र बनेपनि त्यो प्रचार धेरै टिक्न सकेन। उनले रोल्पाका स्थानीय तहमा अक्सिजन सिलिण्डरको व्यापार गरिरहेको खुलासा भएको छ। माओवादी कार्यकर्ताहरूले पूर्वमन्त्री पुनको व्यक्तिगत लगानीमा रोल्पाका स्थानीय तहसम्म अक्सिजन सिलिण्डर पु¥याए जसरी सस्तो प्रचारबाजी गरिरहेका छन्। तर, पूर्वमन्त्री निकटकै केही व्यक्तिहरुले जिल्लाका सात स्थानीय तहलाई नीला रंगका अक्सिजन सिलिण्डर बेचिरहेका छन्।
माओवादी कार्यकर्ता तथा निकट पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय संचारमाध्यममा अक्सिजन सिलिण्डरसँगै नेता वर्षमान पुन र लुम्बिनी प्रदेस सांसद दिपेन्द्र पुनको फोटो राखेर चुवानी प्रचार थालेपनि टिका–टिप्पणी शुरु हुन थालेको छ । वर्षमान पुनको पहलमा आएको अक्सिजन सिलिण्डर आफूहरूले भुक्तानी गरेको पुन निकट सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर पुनले स्वीकार गरेका छन् । माओवादी कार्यकर्ताहरूले भने रोल्पाका नागरिकहरुलाई निःशुल्क सिलिन्डर उपलब्ध गराए जसरी प्रचार गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको चुनावी प्रचारमा भने भ्रम मात्रै रहेको छ ।
पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले कोरोना महामारीको समयमा सेवा भन्दा व्यापार गरिरहेको एमालेकी नेतृ इश्वरी जिएमले टिप्पणी गरिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत संघीय सरकार, वर्षमान पुन र दिपेन्द्र पुनको पहल रोल्पा ल्याइएका अक्सिजन सिलिन्डर व्यापार भइरहेको समेत आरोप लगाइन ।
तर, यसको नेता वर्षमान पुनले खण्डन गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले उक्त आरोपप्रति स्पष्ट पारेका हुन् ।
मन्त्री आलेले २३ हजारमा किनेको सिलिण्डर पुनले २६ हजार तिरे
वनमन्त्री प्रेम आलेले यस अघि २३ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको निलो रंगको अक्सिजन नेता वर्षमान पुनले २६ हजारमा विक्री गरेको आरोप छ । उनले बुझाएको रकमको भ्याट बिल सार्वजनिक भएको छ । काठमाण्डौँमा रहेको विध म्यानेजमेन्ट प्रा.लिले लुंग्रि गाउँपालिका रोल्पालाई भ्याट बाहेक २६ हजारमा विक्री गरेको विल सार्वजनिक गरिएको छ ।
पुन लेख्छन् : ‘मलाई बदनाम गर्न कान्तिपुर पत्रिकाका प्रतिष्ठित पत्रकार काशीराम डाँगी र रोल्पा एमाले नेत्री इश्वरी घर्ती लगायतका एमाले मित्रहरू लाग्नु खेदजनक छ । कोरोना महामारीमा जिल्लामा अक्सिजन सिलिन्डर मेरो पहलमा तीन पटक पठाएको हो । यो बिषय सार्वजनिक नै छ । नपा, गापा र जिल्ला अस्पतालको अनुरोधमा गर्दै आएको छु । यो काम एमाले नेतृत्वको संघीय र प्रदेश सरकारको होइन र ? आजको मितिसम्म एक सिन्को पनि सरकारबाट कुनै सामाग्री लिएको छैन । बिक्री वा कुनै प्रकारको दुरूपयोगको प्रसंग कसरी आयो ? कोरोना महामारीमा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट रचनात्मक काम गरौं । जनताको एक एक जीबन रक्षामा लागौ । संकटको समय राजनीति गर्नु अपराध हो ।’
प्रकाशित मिति: बुधवार, जेठ १२, २०७८, ०८:०५:१४